Saraakiisha Ciidamada oo looga yeeray Madaxtooyada Galmudug (SAWIRRO) – AfmoNews
Saraakiisha Ciidamada oo looga yeeray Madaxtooyada Galmudug (SAWIRRO)
Kusimaha Madaxweynaha Galmudug ahna Madaxweyne Kuxigeenka, Cali Daahir Ciid ayaa caawa shir deg deg ah oo amniga looga hadlayay isugu yeeray Saraakiisha Ciidamada.
Shirkan oo looga hadlayay shantii qof ee maanta lagu dilay deegaanka Xirsi Lugey ee duleedka Degmada Balanballe ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa Madaxtooyada Magaalada Dhuusamareeb kaga qaybgalay Saraakiisha Ciidamada Booliska, Nabad Sugidda, Gorgor iyo Saraakiisha Militariga Jabuuti ee qaybta ka ah Amisom.
Shirka oo sidoo kale uu goobjoog ka ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Galmudug, Cabdi Maxamed Jaamac (Waayeel) ayaa waxaa Saraakiisha Ciidamada lagu faray inay ka falceliyeen dhacdadii Xirsi Lugey.
Cali Daahir Ciid, Madaxweyne Kuxigeenka Galmudug ayaa qoraal uu gelinkii dambe ee maanta uu soo saaray waxaa uu ciidamada ku faray in ay si deg deg ahi gacanta ugu soo dhigaan maleeshiyadii falkaasi gaysatay.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle ayaa isna sheegay in dadka la dilay la weeraray, xilli ay geed hoos harsaneyeen, isla-markaana ay dileen maleeshiyaad aan la garanayn.
Saraakiisha Ciidamada Galmudug iyo Odayaasha Dhaqanka ee deegaanka ayaase kuu sheegaya in dilka dadkaasi uu salka ku hayo aanooyinka beelaha.
The White House is examining landmarks between the United States and the Taliban for peace talks with Kabul –